Dowladda Britain Oo Safiir Cusub Soo Magacowdey Dalka Soomaaliya – Oodweyne Online
Dowladda Britain Oo Safiir Cusub Soo Magacowdey Dalka Soomaaliya
odweyneMarch 16, 2015Last Updated: March 16, 2015
London, UK — Dowlada Britain ayaa magacawday safiir cusub dalka Soomaaliya iyadoo ay tahay haweeney lagu magacaabo Harriet Mathews. Danjiraha cusub oo la sheegay in ay badeli doonto danjirihii hore Mr. Neil Wigan sida warsaxafadeedku uga soo baxay xafiiska wasaradda arrimaha dibadda dalka UK.
Haweeneydan Mathews ayaa si rasmi ah shaqadeeda ula wareegi doonta bisha June ee soo socota, safiirka cusub waxaa ay wasaarada arrimaha dibadda ku soo biirtay sanadki 1997-dii, iyadoo hadda madax ka ahayd hayad lo ababulay cudurka la dagaalanka Ebola. Ms. Mathews oo ah qof aqoon duruqsan u leh arimaha qaradda Afrika ayaa waxaa ay ka soo shaqeysay sadex goobood oo Qaaradda Afrika kamid ah sida iyadoo madax ka noqotay xafiisyada Bariga iyo galbeedka Afrika ee dowladda UK.
Safirka cusub ee dowladda Britain ee Soomaaliya Ms. Mathews ayaa sidoo kale waxaa aya ka soo shaqeysay xafiiska arrimaha dibadda ee UK wadamada ay ka mid yihiin Brazil, Israel iyo Afghanistan.
Dhowaan ayaa dowlada Maraykanka ay u soo magacawday danjire cusub oo haween ah dalka Soomaaliya waxayna talabadan cusub noqonaysaa haweeneydii labaad oo ka soo jeeda wadamada reer Galbeedka oo wakiil logaga dhigo dalka Soomaaliya.